Tababaraha kooxda Derby County Wayne Rooney ayaa ka dhiibtay fikirkiisa kooxda uu rajaynayo inay ku guuleysato Premier League xilli ciyaareedkan.
Manchester United, oo markii ugu dambeysay hanatay horyaalka sanadkii 2013 iyo xilli ciyaareedkii hore oo uu hogaaminayay Sir Alex Ferguson, ayaa hada ku sugan bartamaha 2020-21
Xilli ciyaareedkaan wuxuu bedel u noqday Ole Gunnar Solskjär, kaasoo 33 dhibcood ka hooseeya kooxda heysata horyaalka ee Liverpool.
Sikastaba, Wayne Rooney ayaa rumeysan in xiliciyaareed kaan uu yahay xilli ciyaareedkiisii ​​kooxdiisii ​​hore ee Manchester United sababa la xiriira guulaha ay gaareen ciyaartoyda cusub ee Bruno Fernandes iyo Edinson Cavani.
Sikastaba, Wayne ayaa rumeysan in saxiixyada cusub ay horseed u noqdeen cadaadis saar Paul Pogba, kaasoo siiyay xorriyad dheeri ah.
Shirkiisa jaraa’id ee ka hor kulanka QPR, Rooney wuxuu yiri: “Sanadihii ugu dambeeyay, Manchester United diyaar uma ahayn inay u tartanto horyaalka laakiin hada waxay keensatay ciyaartoy sida Fernandes iyo Cavani, ciyaartooy leh maskax guul wanaagsan oo caawisay. “
“Haatan safku wuxuu u tartamayaa Premier League. Lix isbuuc ka hor waxaan u sheegay tababarayaasha halkan ka shaqeeya in aan filayo in Manchester United ay ku guuleysan doonto horyaalka, wali waxaan maanta dareemayaa sidaas”.
Paul Pogba ayaa door weyn ka ciyaari doona arintaas. Ciyaaryahanadda lagu soo qaatay maskax guuleed waxay xoogaa culeys ah ka qaadi doonaan Paul wuxuuna haatan soo bandhigi karaa tayadiisa horyaalka.
Ayaa sheegtey mas’uuliyadda qaraxyadii dhimashada badnaa ee Baqdaad? – Axadle